Kungani ngilwa nokuhlanganyela kwami, ukulwa nentombazane, ukulwa negazi
Kuthiwani uma ngiphupha ukulwa? Ukuchazwa kwamaphupho mayelana nokulwa
Ukulwa nobuhlungu obuvezwe esikhathini esidlule, ukukhishwa kwemizwelo, isifiso sokufakazela noma yini ekulweni nomphikisi noma isitha. Abantu abaningi bahlobanisa iphupho mayelana nokulwa okubandakanyeka ngokuqondile ngxabano ezayo, abajwayele ukushayela, ukulahlekelwa noma ukuzuza. Kunezinhlobo eziningana eziyisisekelo zamaphupho mayelana nokulwa.
Amaphupho okulwa lapho ungahlanganyeli khona, kodwa ukubuka kusuka ngaphandle - kusho ukuthi esikhathini esizayo maduze kuzodingeka uhlulele impikiswano phakathi kwabalingani bakho, abangani, obaziyo. Mhlawumbe uzocelwa usizo, ikakhulukazi ezindabeni zomuntu siqu.
Ngiyaphupha empini engiyibamba iqhaza - ngingakhuluma ngokulahlekelwa kwendawo yangasese esikhathini esizayo, kusukela ezihlwini nasezikhwameni, nokuphela ngezinto ezinenani elikhulu njengezindlu. Lokhu kwenzeka uma kwenzeka ushaywa ngephupho. Uma unqobile empini, ngokuphambene nalokho, noma yikuphi ukuthengwa okuxhunywe ngenhlanhla kunokushiseka nokusebenza kanzima.
Uma ulwa negazi, othile oseduze nawe, abangane noma abangane abahle bahlela into embi. Qaphela, ungathengisa abantu ongalindele. Enye indlela ukuthi awuwutholi usizo kulabo obalale, noma uzothola ukwenqaba kumuntu omthandayo.
Uma ulwa nentombazane, kubalulekile ukwazi ukuthi yiliphi uhlangothi intombazane ehlanganyela kuyo. Uma wena, njengentombazana, uhlanganyela ekulwa nomuntu ongaziwa - ukulala kungakhuluma ngempi emisebenzini, ezokuthutha zomphakathi noma emgwaqeni. Lokho akuhlobene nomndeni. Uma owesifazane elwa nesoka langaphambili, uvumela ukuthi ahambe naye. Iphupho elinjalo lizoholela ekuqinisekiseni umbhangqwana wamanje. Futhi uma kwenzeka ulwa nesoka noma umyeni wakho, kulindeleke ukuba ube nezingxabano, izingxabano, mhlawumbe uhlukanise esikhathini esizayo. Ukulwa nomphikisana kubonisa umhawu kumyeni wakhe.
Uma uphupha ukuthi uhlanganyela ekulweni kweqembu, lungela izimpikiswano emsebenzini noma ezokuthutha zomphakathi. Mhlawumbe, le mpikiswano izokwenzeka endaweni yokudlela yokudlela nabangani noma abantu abangabazi. Lena akuyona iphupho elihle kakhulu.
Ukulwa, lapho ubulala khona umphikisi, kusho ukuthi esikhathini esizayo esiseduze uzokhipha ukungahambi kahle, intukuthelo, nokucasula kubantu abakuzungezile. Kubalulekile ukuba uqaphele futhi uzigcine usesandleni sakho. Uma kungenjalo, kungase kusongele ngezinkinga zomsebenzi noma zomndeni.
Ukulwa ne-monster, i-monster amaphupho enkingeni. Mhlawumbe, manje noma esikhathini esizayo esiseduze uzothola isimo esibonakala singenathemba kuwe. Uma ubalekela ku-monster ephusheni, noma kukunqoba, kusho ukuthi izimo zizovela ngendlela engafanele futhi ngeke ukwazi ukuzixazulula. Uma unqobile, uzothola indlela yokuphuma. Uma empini umdwebo, noma i-monster ivele yaphuma ngokuzumayo - uzothola indlela yokuphuma, kodwa kuyoba isikhathi eside.
Kumele kuqashelwe ukuthi amaphupho mayelana nokulwa akudingeki njalo kuthiwe yizingxabano zasekhaya ezizayo emndenini noma izimo eziphikisanayo ngaphandle kwekhaya. Ngokukhethekile musa ukuthatha konke ngokoqobo. Konke ngoba amaphupho angumsebenzi we-subconscious yethu. Kungenxa yezithombe ezifinyeleleka ekuqondeni kwethu ukuthi libika ngemicimbi ethile engenzeka kuwe noma izokwenzeke ngempela.
Konke kuxhomeke kulokho okwenzekile kuwe kuze kube yilapho uphupha ngokulwa. Isibonelo, uma ngesonto elidlule uxabana nomakhelwane phezu kwensimu, kungenzeka ukuthi iphupho likuxwayisa ukuthi umakhelwane ngesonto noma inyanga uzofaka inkantolo enkantolo.
Ngokuvamile ukuqonda kwethu emaphupheni ngokulwa, ngesibonelo somphikisi, kungasho izimo, ubunzima besimo. Uma uphumelele empini - esikhathini esizayo uzobhekana nakho konke, uma ulahlekelwa - izimo zingaba namandla. Ukulala, lapho kwakukhona umdwebo - uzokwenza imizamo futhi ekugcineni unqobe zonke izinkinga, kodwa lokhu kuzothatha isikhathi.
Iphupho liphupha ngani?
Amantombazane asendulo: ukwelashwa okuqhubekayo kwezincwadi zephupho
Ukuchazwa kwamaphupho mayelana nezinhlanzi ezifile
Ibhuku lezincwadi elidumile: libheke kanjani igundane elimhlophe?
Iyini iphupho le-mushroom encwadini yephupho?
Iyini iphupho lokuthutha?
I-pullover eyaziwa nge-Knitted
I-wraps ephumelela kakhulu yokulahlekelwa isisindo
Ungabelana kanjani ngemisebenzi yasendlini?
I-Hepatitis B ngesikhathi sokukhulelwa
Yini okufanele ibe sekhwameni lesisimonyo emva kwamakhambi angu-40: 4 azosiza ukubheka omncane!
Uhlu lweziphuzo ezidumile emhlabeni wonke
Ukubuyekeza kwefilimu "Izinyanga eziyishumi nantathu"
Isilimo esidliwayo esinamagatsha anamanzi njengendlela yokulungisa isisindo
Ukuzalwa kwangaphambi kokuqala: kanjani ukuvimbela?
Kunokuba ungenwe igciwane ngokusebenzisa inyama
I-Labrador Inja ibeletha: imigomo, izici
Uzoya kuphi ukuphumula nengane?
Isobho sesinkwa sase-Italy